Soo dejisan Wattpad 6.33.1 – Vessoft
Qeybta: Akhristayaasha E-buugga
Bogga rasmiga ah: Wattpad
Wattpad – software ah u baadhi fudud iyo akhriska buugaagta. Wattpad ku jira maktabadda weyn ee suugaanta qaybsan qaybaha iyo jiho oo kala duwan. Software ayaa u ogolaanaya in ay reserved fursadaha akhriska, sida hanuuninta ee shaashadda, soo bandhigeen ee bar xaaladda, navigation furayaasha mugga iwm Wattpad u saamaxaaya in ay akhriyaan sharaxaad gaaban ee buugga by, ku dar buugaagta maktabadda iyo iyaga wadaagaan saaxiibada via codsiyada kale. Software wuxuu kuu ogol yahay in aad akhrido ama boostada comments iyo codeeyaan buugga.
Database badan oo e-buugaagta
Ku haboon search
Display ah sharaxaad kooban ee buugga
Soo dejisan Wattpad
Faallo ku saabsan Wattpad
Wattpad Xirfadaha la xiriira
BBC News – waa barnaamij lagu daawado wararka dhabta ah iyo qodobbada laga helo mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn macluumaadka. Codsigu wuxuu siinayaa tayo iyo waxyaabo xiiso leh oo ku saabsan dhacdooyinka ka dhacay dalal kala duwan.